Fampandrenesana momba ny Vovonana ho an’ny Fampitam-baovaon’Olontsotra Global Voices any Azia Pasifika: Manasa anao hiaraka aminay any Taipei, Taïwan amin’ny 2 Jona! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2019 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny English, नेपाली, Español, Aymara, 繁體中文, 繁體中文, বাংলা, English
Faly izahay manambara fa hampiantrano ny Vovonana ho an'ny Fampitam-baovaon'Olontsotra Global Voices any Azia Pasifika ao Taipei, Taiwan ny ekipanay any Azia. Hofaranana amin'ny valan-dresaka ho an'ny daholobe ny 2 Jona 2019 ny hetsika, izay ahitana ny fivoriana anatiny ho an'ny vondrom-piarahamonina GV sy ny fikambanana mpiara-miasa. Eto ny fisoratana anarana ho an'ny fihaonambe.
Tahaka ny hetsika GV rehetra, fotoana manokana hianarana sy hizarana traikefa amin'ny vondrom-piarahamonina mavitrika isankarazany manerantany ny Vovonana ho an'ny Fampitam-baovaon'Olontsotra Global Voices any Azia Pasifika. Tsidiho ny tranonkalan'ny Vovonana raha hijery ny antsipiriany momba ny toerana, ny fisoratana anarana, ny fandaharam-potoana ary ny maro hafa-ary tadidio ny daty!